ကလေး(၁၁)ယောကျ အမဖွေဈလာတဲ့ အသကျ(၂၃)နှဈအရှယျအမြိုးသမီး – One Daily Media
သငျ့မှာသာ အခြိနျနှငျ့ပိုကျဆံအလုံလောကျရှိမယျ ကလေးဘယျနှဈယောကျလောကျ လိုခငျြလဲဆိုတာ ရေးသားပေးခဲ့ကွပါဦး .
ကလေး(၁၁)ယောက် အမေဖြစ်လာတဲ့ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး
သင့်ရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို တပြိုင်နက်တည်း တောင်းခံနေမယ့် ကလေး (၁၁) ယောက်ရှိနေမယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။သင့်အတွက် လွယ်ကူပါ့မလား ?? တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒါဟာ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် Christina Oztu ရဲ့လက်ရှိဘဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမ အတွက်စိတ်ပင်ပန်းစရာလို့ ထင်ရနိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူမဟာအလွန်ပျော်ရွှင်နေပြီး နောက်ထပ် ကလေးများထပ်ယူရန်ပင် ဆန္ဒရှိနေပါသေးတယ်။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက် သူမဘဝအကြောင်းတစေ့တစောင်း သွားရောက်မေးမြန်းထားသည်များကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ ကလေးငယ်လေးများရဲ့ ချစ်စဖွယ် ဗီဒီယိုလေးကိုလဲ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
သူမဟာအသက် 17 နှစ်အရွယ်မှာ ပထမဆုံးသော ရင်‌သွေးလေးကို စတင်‌ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ single mother တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုမှာ လက်ရှ်ိခင်ပွန်းသည်နဲ့ စတင်‌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူမဘဝလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သူဟာ သူမကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားခဲ့ပြီး လက်ထပ်ပြီး ရင်သွေးများစွာယူရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၂) ကြီးမားသောမိသားစုကြီး ဖြစ်လာရခြင်း၏ လျို့ဝှက်ချက်
Christina ရဲ့ ရင်သွေး အများစုဟာ တပြိုင်နက်ထဲမွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက်ရွယ်တူများဖြစ်ကြပါတယ် ။ တပြိုင်နက်တည်း ကလေးအများကြီးမွေးဖွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကြီးမားသောမိသားစုကြီး အမြန်ဆုံးဖြစ်လာရန် ရည်ရွယ်ထားခဲ့တဲ့ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာ အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ကလေး အားလုံးကို မမွေးဖွားခဲ့ပေမယ့် သွေးသားတော်စပ်မှုအရ ကလေးအားလုံးရဲ့ မိခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စုံတွဲဟာ အရေအတွက်အတိအကျမသတ်မှတ်ထားသော်လည်း တစ်ဒါဇင် မကသော ရင်သွေးလေးများ အလိုရှိနေပါတယ်။
(၃) ရွာတစ်ရွာစာ ကလေးထိန်းများ
သူမ၏ လက်တွဲဖော် အသက်(၅၆)နှစ်အရွယ် မီလျံနာသူဌေးကတော့ မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သူ စူပါ Daddy ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာမှာ Chritina ကို ကူညီပေးမယ့် အိမ်တော်ထိန်းနှင့် လက်ထောက်များစွာလည်း ခန့်ထားပါတယ်။
(၄) Christina ၏နေ့စဉ်ဘဝ
သူမတို့ဇနီးမောင်နှံကြား တာဝန်ခွဲဝေယူထားကြကြောင်း Christina ကပြောပြပါတယ်။ အမျိုးသားဖြစ်သူက အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး သူမကတော့ ကလေးများကိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း ၊ ဂိမ်းကစားခြင်း ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းများလည်း အတူတကွလုပ်လေ့ရှိပြီး အားလပ်ရက်များကိုလည်း မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးကုန်ဆုံးလေ့ရှိတဲ့အပြင် ထမင်းဝိုင်းကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း အတူစားကြတယ်လို့ Christina က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Bonus : photoshooting အတွက် လူစုနေကြပုံများကို ရှူစားကြည့်ပါဦး
သင့်မှာသာ အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံအလုံလောက်ရှိမယ် ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်လောက် လိုချင်လဲဆိုတာ ရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦး ..
သငျ့စိတျကို တှဝေသှေားစမေယျ့ မကျြလှညျ့ဆနျဆနျ...